Maitiro ekudzoreredza network kubatana paMac, Emulator.online ▷ 🥇
Maitiro ekudzoreredza network kubatana paMac
Apple Macs uye MacBooks makomputa akanaka chaizvo kutarisa nekuisa muhofisi kana padhesiki redu, asi zvakare, mukunaka kwavo uye kukwana, ivo vachiri makomputa, saka vanogona kumira kushanda uye vanogona kunge vaine matambudziko ekubatana. zvimwe kana zvishoma nyore kugadzirisa.
Kana tikacherechedza paMac yedu kuti Internet inouya uye inoenda, iwo mapeji ewebhu haavhure nemazvo kana mashandisiro anoshandisa masevhisi eInternet (seVoIP kana vhidhiyo musangano wekushambadzira) haashande sezvavanofanira, wasvika pagwara rakakodzera. apa zvirokwazvo isu tichawana dzese nzira, yakapusa uye inokurumidza kunyorera kunyangwe kune wekutanga mushandisi, ku dzosera network kubatana paMacsaka unogona kudzokera kurodha pasi uye kurodha kumhanya kwawakaona dambudziko risati raitika uye kudzokera kubasa kana kudzidza paMac yako sekunge pasina chakaitika.
VERENGA ZVIMWE: Mhinduro dzer router uye wifi yekubatanidza matambudziko
Maitiro ekudzoreredza Mac kubatanidza
Kuti udzorere kubatana paMac isu tinokuratidza zvese zvishandiso zvekuongorora zviripo mune yeMacOS sisitimu inoshanda sekukurumidza kugadzirira kushandisa uye humwe hunyanzvi hunyengeri hwekuita iyo Internet yekubatanidza ishande zvakare sekunge isu tanga yatanga Mac kekutanga.
Shandisa wireless diagnostics
Kana dambudziko rekubatana rikaitika kana isu takabatana ne Wi-Fi network, tinogona kuyedza nechombo Kuongororwa pasina waya yakapihwa naApple pachayo. Kuti uishandise, ita shuwa kuti iwe wakabatanidzwa kune yeWi-Fi network, pinda uye bata Sarudzo (Alt), ngatiendei kune iyo Wi-Fi mamiriro menyu mune yepamusoro kurudyi uye tinya Vhura wireless diagnostics.
Isu tinopinda humbowo hweacomputer account, tobva tamirira kuti chishandiso chiite macheki ayo. Zvichienderana nemhedzisiro, hwindo rinogona kuvhurika nemamwe mazano ekutevera, asi pfupiso hwindo rekuita kunoitwa neMac kudzorera kubatana kwacho kunogona kuoneka zvakare. Kana dambudziko rikaitika (mutsetse unouya woenda), hwindo rakafanana neinotevera rinogona zvakare kuoneka.
Mune ino kesi zvinokurudzirwa kumutsa iro izwi Chengetedza hukama hwako hweWi-Fi, kusiya basa rekutarisa kubatana kune iyo Mac, kuti igone kupindira kana paine matambudziko. Kuvhura chinyorwa Enda kupfupiso pachinzvimbo, isu tinowana pfupiso yeruzivo nezve yedu network uye mamwe matipi anobatsira ekushandisa.
DNS ibasa rakakosha reInternet yekubatanidza uye, kunyangwe kana iyo tambo ichishanda zvakakwana uye modem yakabatana, zvakaringana kuti sevhisi iyi inoratidza kusashanda (semuenzaniso, nekuda kwekudzima kwerinoshanda reDNS) kudzivirira iyo kubatana nguva dzose. webhusaiti.
Kuti utarise kana dambudziko riine hukama neDNS, vhura menyu Wifi O Ethernet kumusoro kumusoro kurira chinhu Vhura zvaunofarira network, ngatiendei kune chinoshanda chinongedzo panguva ino, tinya paPamberi uye pakupedzisira enda kuchiratidziri DNS.
Isu tichaona chaizvo iyo IP kero yemodem kana router, asi isu tinogona kuwedzera iyo nyowani DNS server nekutsikirira + icon pazasi nekutaipa 8.8.8.8 (Google DNS, inogara ichisimudza uye ichimhanya). Ipapo isu tinodzima yekare DNS server iripo uye tinya pazasi pane Zvakanaka, kushandisa chete sevha yakasarudzwa nesu. Kuti uzive zvakawanda isu tinogona zvakare kuverenga gwara redu Ungachinja sei DNS.
Delete network marongero uye mafaira aunofarira
Kana Wireless Diagnosis uye iyo shanduko yeDNS isina kugadzirisa dambudziko rekubatana, tinogona kuyedza kudzima maratidziro enetiweki aripo musystem, kuitira kuti tidzokorore mukana weiyo netiweki yeWi-Fi yakashandiswa kusvika zvino. Kuti uenderere mberi, dzima yazvino inoshanda yeWi-Fi kubatana (kubva kumusoro kurudyi Wi-Fi menyu), vhura iyo Tsvaga muDock bar pazasi, enda kumenu O, tichaenda kuvhura Enda kune folda uye isu tinonyora inotevera nzira.
/ Raibhurari / Zvaunoda / Sisitimu Zvirongwa
Kamwe iyi folda painovhura, bvisa kana kufambisa anotevera mafaera ku Recycle Bin paMac:
Isu tinodzima mafaera ese, tobva tangazve Mac yacho kuitira kuti shanduko dziitwe. Paunotangazve, isu tinoedza kubatanidza kune inogumbura yeWi-Fi network zvakare, kuti tione kana kubatana kuri kushanda mushe.
Mamwe matipi anobatsira
Kana isu tikasagadzirisa izvi, tinofanirwa kuongorora kumberi, sezvo panogona kunge paine nyaya isingabate Mac zvakananga asi inosanganisira modem / router kana mhando yekubatana yatinoshandisa kubatana nayo. Kuedza kuzvigadzirisa, isu takaedzawo iwo matipi akapihwa mune inotevera runyorwa:
Ngatitangei modem- Iyi ndeimwe yemazano akareruka, asi inogona kugadzirisa dambudziko, kunyanya kana zvimwe zvishandiso zvakabatana netiweki imwechete zvakavewo nematambudziko akafanana neMac.Kutangazve kunokutendera kuti ukurumidze kudzorera kubatana pasina kuita chero chimwe chinhu.
Isu tinoshandisa 5 GHz Wi-Fi kubatana- MaMacs ese emazuva ano ane mbiri bhendi yekubatanidza uye zviri nani kushandisa nguva dzose iyo 5 GHz bhendi, isinganyanye kukanganiswa nemambure ari padyo uye nekukurumidza zvakanyanya mune chero mamiriro Kuti tidzidze zvimwe tinogona kuverenga gwara redu Musiyano uripo pakati pe2,4 GHz uye 5 GHz Wi-Fi network; zvirinani?
Isu tinoshandisa kubatana kweEthernet: Imwe nzira yekukurumidza kuti unzwisise kana dambudziko riri rekuti kubatika kweWi-Fi kunosanganisira kushandiswa kwetambo yakareba kwazvo yeEthernet, kuti ugone kubatanidza Mac kuenda kumodem kunyangwe kubva kumakamuri akasiyana. Kana iko kubatana kuchishanda, dambudziko ndere module yeWi-Fi yeMac kana iyo module yeWi-Fi yemodem, sezvinoonekwawo mugwara. Mhinduro dzer router uye wifi yekubatanidza matambudziko.
Isu tinobvisa Range Extender kana Powerline: Kana isu tikabatanidza iyo Mac kuburikidza neWi-Fi Extender kana Powerline, tinoedza kuvabvisa uye kubatana zvakananga kune modem network kana kushandisa Ethernet tambo. Midziyo iyi inobatsira kwazvo, asi inogona kupisa zvakanyanya nekufamba kwenguva uye ichivharira internet yako kubatanidza kudzamara zvabviswa uye zvobatanidzwazve mushure memaminetsi mashoma.
Kushandisa matipi ese aratidzwa mudhairekitori tinogona kugadzirisa matambudziko mazhinji ekubatana neMac isu pachedu, tisingade kufonera nyanzvi yemakomputa kana kubatidza mimwe michina uye kupenga pakati pezviuru zvakaomarara uye zvakaoma kutevera magwara mu Webhu.
Kana zvisinei nezano riri mugwara, netiweki yekubatanidza isingashande paMac, hapana kana chasara kuti uite asi kutanga nzira yekudzoreredza mushure mekuchengetedza mafaera ako kune a USB ekunze kutyaira; kuenderera nekudzoreredza ingoverenga magwara edu Maitiro ekugadzirisa Mac, gadzirisa macOS matambudziko uye zvikanganiso mi 9 nzira dzekutanga Mac yako uye udzore yakakodzera kutanga.
Huawei Foni Clone Chinjana Dhata uye Mafaira kuNew Smartphone
Mashandisiro ekushandisa maPC maviri aine imwe kuratidza (HDMI switch)
Zvinorevei FWA, imwe nzira ye fiber yeiyo inokurumidza Internet?
Ini ndakabatana neWi-Fi asi ini handisi kubhurawuza: zvekuita?
Maitiro ekuona sei kuvhara kwe5G
Solutions kana Android Wi-Fi isingabatanidzi kune network kana Internet
Ungachinja sei DNS paMoto TV Tsvimbo
Maitiro ekugadzirisa seVodafone station
Maitiro ekuunza iyo Internet kune ese pasi uye pakona yeimba
Goverana yakabatana ye wired pasina kushandisa router
Gadzira iyo VPN network yekutamba online simulating LAN
Default password uye login kune ese ma routers
Gadzira nyore nyore kutumira kwekutakurira pane router kuvhura matauro ekutaurirana
Remote desktop yekubatanidza kubva kune iPhone / iPad kune komputa yako